HS:- R/wasaaraha Soomaaliya oo bilahii la soo dhaafay aad u daneynayey sidii uu xil ka qaadis ugu sameyn lahaa dhawr wasiir oo uu ku jiro wasiirka arimaha gudaha ayaa waxaa hada soo baxeysa in ilaa 5 wasiir ugu yaraan oo uu kaalinta koowaad uga jiro wasiir Godax in xilka laga xayuubinayo dhawaan.
Inkasta oo aanan si dhab ah u ogeyn waxa lagu heysto wasiirada kale hadane wasiirka arimaha gudaha waxuu xilkiisa ku waayanayaa dhawr arimood oo hadii bulshada loo soo bandhigo macquul ah ayna ugu weyn tahay inuusan jirin wax xiriir ah oo isaga iyo r/wasaaraha ka dhaxeeya sidoo kale ma jirto xiriir la taaban karo oo isaga kala dhaxeeya xildhibaanada beesha Xawaadle iskabadaa kuwa reer Hiiraan oo dhane.
Isku soo duuboo wasiirka arimaha gudaha waxey u muuqataa intii ilaah ugu talo galay siyaasada Soomaaliya waa ka dhax muuqday federal waa is deeyeen waxow dadka dowlada kula jiro caayaba hogaan Hiiraane warkiisa dey.Isku soo duuboo wasiir Godax oo mooshin dhawaan ay ka keeneen mudanayaasha baarlamaanka ka bad baaday hada jaaniskiisa uu inta xukumadan u hartay uga sii mid noqon karo waa Million to one jaanis rumeyso ama ha rumeysan waxuuna qeyb ka noqondoonaa amaba lagu bilaabi doonaa isbedello xoogan oo lagu wado in lagu sameeyo xukumada hada jirta.
Wasiir Godax marka laga soo tago inuu r/wasaaraha Soomaaliya xil ka qaadis ku sameynayo hadane waxaa siweyn ugu shaqeystay baa la leeyahay 4 ka mid ah xildhibaanada beesha Xawaadle oo sida lagu soo waramayo uu handadaad wax uga qaadi waayey maadama ay yahiin kuwo dhinackasta ka dhisan xaga aqoonta.
Bulshada reer Hiiraan xitaa in 4taan xildhibaan magacyadooda loo sheego uma baahno 3 waa reer Uk midna waa reer Kanada. Goodby mr Godax welcome............gadaal ayaan ka soo sheegi doonaa mid ka mid ah 3 aqoonyahano loo badinayo inuu midkood bedeli doono Mr Godax.
R/wasaare Cabdiweli rag ika dheh haduu isbedel uu Godax ku jiro sameeyo sidaasina waxaa laga xigtay qaar ka mid ah xildhibaano uu horey u af lagaadeeyey intii uu wasiirka ahaa iyoka horba.
dhinaca wasiir Godax qudhiisu waa ogyahay iney seefta qaadeyso isaga qudhiisa laakinse waxuu ku dadaali doonaa baa la leeyahay inta uusan xafiiska ka deign amaba aan xilka laga qadin sidii uu r/wasaaraha Soomaaliya iyo bulshada Hiiraan iskaka horkeeni lahaa.
Laakinse dadka si fiican u yaqaana R/wasaare Cabdweli waxey leeyahiin aad ayuu u dareensan yahay in ay mr Godax iyo siyaasiyiin kale oo Mogdishu joogo doonayaan iney sumcada ugu ciyaaraan si ay xukumadiisa u fashiliyaan si uusan u helin fursad danbe oo uu dalka wax uga nqoon karo mustaqbalka wax badanoo wanaag u muuqday oo dalka anfaci lahaane horey ayey uga fashiliyeen wasiir Godax iyo rag intooda badan madaxweynaha ku siyaasad ah.
Laakinse dadka siyaasada Soomaaliya saadaaliya waxey leeyahiin mar hore ayey aheyd r/wasaaraha inuu wasiirada uu hada xilka ka qaadayo meesha ka saaro maadaama........
· admin on August 10 2014 21:00:27 · 0 Comments · 1419 Reads ·
14,581,418 unique visits